Sudo yaive nenjodzi yakapa mukana wekuwana | Linux Vakapindwa muropa
Kushushikana kwesudo kunogona kupa varwisi midzi kupinda paLinux masisitimu
Kana iwe ukashandisa Linux uye haina kurira kujairira kwauri SudoZvakanaka, regai ndingotaura kuti zvinondishamisa. Chaizvoizvo, pese paunoda kunyora mutemo unoda mvumo yakasarudzika, ndicho chinhu chekutanga chaunofanira kunyora, se "sudo apt kugadzirisa" pane masisitimu anoshandisa APT kana "sudo pacman -Syu" pane masisitimu anoshandisa Pacman. Tichifunga nezve iyo inotibvumidza isu kuita chero chinhu, zvakakosha kuti ive yakakwana, uye hatigone kutaura kuti anga ari maawa mashoma apfuura.
Vekuchengeteka vatsvaguriri vakashuma ruzivo rwekushushikana muSudo izvo inogona kushandiswa nemushandisi yakaipa kuti awane midzi yemidzi paLinux anoshanda masystem. Ava vaongorori vanotaura zvakananga «huwandu hwakawanda hweLinux-based system«, Asi havataure kuti ndeapi. Ehe, ini ndinogona kusimbisa kuti Sudo yakatovandudzwa paArch Linux-based uye Ubuntu-based masisitimu, zvirinani mune zvepamutemo zvinonaka.
Pamwe rinonyanya kukosha Sudo glitch munhoroondo yaro ichangopfuura
Vatsvagiri vanoti ichi chingave chinonyanya kukosha Sudo munhoroondo yazvino. Mutongo, unozivikanwa saBaron Samedit, wakanyorwa se CVE-2021-3156 uye chinhu chinonyanya kunetsa ndechekuti yakavapo kweanoda kusvika makore gumi. Chii chinofanira kutidzikamisa zvishoma, kunyange hazvo chisina kuwandisa, ndechekuti inogona kungoshandiswa chete nekuwana kwenyama kuchigadzirwa.
Kuchengetedza vaongorori vakakwanisa kushandisa kukanganisa mukushandurwa kwetatu kweanonyanya kufarirwa masisitimu anoshanda: Ubuntu 1.8.31 v20.04, Debian 1.8.27 v10, uye Fedora 1.9.2 v33 Havataure izvi zvakananga, asi ivo vanoti «pamwe mamwe masisitimu anoshanda uye kugoverwa zvakare kune njodzi«, Kwandingati kune chimwe chinhu chakachengeteka.
Iyo vhezheni yeSudo inogadzirisa iyi bug ndeye 1.9.5p2:
Sudo pamberi pa 1.9.5p2 ine murwi-wakavakirwa buffer kufashukira, uchibvumira mukana wekukwira kudzura kuburikidza ne "sudoedit -s" uye yekuraira mutsara mutsara unoguma nehunhu humwe hwekudzokera shure.
Rinopfuura rinopfuura gore rapfuura rakagadziriswa rimwe dambudziko rakafanana, uye kunyangwe Miter isingataure nezvayo, Canonical inotaura icho chinonyanya kukosha kugadzirisa icho kana iyo giravhiti yakakwira. Tichifunga nezvekuti zviri nyore sei kushandisa chigamba, kunyangwe kana pasina munhu anobata zvishandiso zvedu, zvinokurudzirwa kuti ugadzirise nekukurumidza sezvazvinogona.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kushushikana kwesudo kunogona kupa varwisi midzi kupinda paLinux masisitimu
Danilo Alejandro Quispe Lucana akadaro
Nezuro husiku ndakawana iyo yekuvandudza (vhezheni 1.9.5p2) muManjaro
Pindura Danilo Alejandro Quispe Lucana
Pablo sanchez akadaro
Neruremekedzo rwakafanira kune Windows 10 vashandisi, kusagadzikana kwakabatiswa nekukurumidza zvakanyanya kupfuura paMicrosoft's OS ...
Pindura Pablo Sanchez
Iyo nyowani vhezheni yeLsFusion 4.0, chikuva chekuvandudza masisitimu eruzivo, yakatoburitswa